Sidee loo doortaa mid ku habboon PE afuufa mashiinka filimka / mashiinka filinka afuufa? - Shanghai Duxia Warshadaha iyo Ganacsiga
Mashiinka afuufaya filimku waa mashiin kululeeya oo dhalaaliya walxaha caagga ah ka dibna afuufa filim. Waxaa jira mashiinno filim afuufaya oo isticmaalaya PE, POF, PVC, PP sida alaabta ceeriin ee wax soo saarka. Maanta waxaan ka hadli doonnaa sida loo iibsado mashiinnada filimada la afuufo Sidee loo iibsan karaa mashiinka filimka afuufa ee lagu afuufayo PE / mashiinka filimka afuufa?
Asal ahaan waxaad u baahan tahay inaad fahanto 2-da qodob ee soo socda.
* Ma u baahan tahay hal fur ama mashiinka mashiinka afuufa mashiinka mashiinka (2 lakabka mashiinka afuufa)? Mise waa mashiin afuufa filimka ABA, ama 3 mashiinka mashiinka filimka afuufa ee wada-xoqida (3 lakabka mashiinka afuufa)?
* Muxuu yahay baaxada filimka ugu badan ee aad rabto inaad soo saarto, waxaan haynaa 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm iyo moodello kale oo ballac ah.
Qodobbada kale ee u baahan in la caddeeyo
* Ma u baahan tahay dib-u-laabasho laba-saldhig ah (laba dabayl) * Ma u baahan tahay madaxa dhimman oo wareegaya, ma waxaad u baahan tahay madaxa dhimman oo sarreeya, mise waxaad u baahan tahay madaxa dhimman ee hoose?
* Ma u baahan tahay processor-ka koronta
* Ma u baahan tahay mashiin si toos ah wax u nuugaya
* Ma u baahan tahay beddele shaashad dhakhso leh, beddele shaashadda haydarooliga, ama beddelaha shaashadda gacanta ee aasaasiga ah?
Haddii aad asal ahaan xaqiijiso jawaabaha su'aalaha kor ku xusan, waxaan kuu soo gudbin karnaa oraah asaasi ah adiga oo raacaya shuruudahaaga aasaasiga ah. Haddii ay jiraan wax su'aalo ah oo aan la hubin, fadlan la xiriir iibkayaga, wuxuu sidoo kale ku siin karaa xigasho sida waafaqsan qaabka caadiga ah.
Hot Hot mashiinka afuufaya, dhagsii si aad waxbadan uga barato.